संकटमा मानवअधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह – Karnalisandesh
संकटमा मानवअधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह
प्रकाशित मितिः ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०९:५१ April 17, 2020
कालिकोट। सामाजिक अभियन्ता एवं बालअधिकारकर्मी अशोकनाथ योगीले संकटका बेलामा मानवअधिकार सम्मान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
असहजता र बेखर्ची बनेका मजदुरहरु पैदल हिडेर गन्तव्यमा पुग्न थालेपछि बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर योगीले सरकारलाई मानवअधिकारप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका हुन्।
लकडाउनको समयमा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कारोनाबाट बच्नका लागि सरकारद्धार जारी लडकाउनको पालना पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्व समुदाय र नेपाली जनताले लकडाउनको पालना गरि दिएर सहयोग गरेका छन्। सबै कार्यालयहरु अनलाइनबाटै चलेका छन्। कहिले व्यस्त नहुने पनि व्यस्त देखिन्छन्। कविहरु, गायककारहरु, रचनाकारहरु, गजलकारहरु, नृत्यकारहरु को हुन्? कहाँ कहाँ घुम्नु रमाउनु भएको रहेछ ? घरैमा बसिबसी जान्ने अवसर पाईएको छ।
निर्वाचनको बेला पर्यबेक्षणको पास लिनेहरुको लाईन निर्वाचन आयोगमा निकै संख्यामा देखिन्थ्यो। बजेट पनि थुप्रै ठाउँबाट आउँथ्यो परियोजना नै बन्थे।टोलटोलमा निरर्वाचन पर्यबेक्षणको नाममा अनुगमन र भोट कसरी हाल्ने सिकाउने गरी प्रचार प्रसार गरेको पाईन्थ्यो।मानवअधिकार वादी संस्थाहरु कति हुन्? कति भ्रष्टचारबीरुद्धका संस्थाहरु निकायहरु कति थिए कति। नागरिक समाज कति थिए कति। आज उनीहरु पनि पिपत्तमै छन् होला।
कोरोरोनाको कहरमा (कोभिड-१९) को संक्रमणमा मिलेर सहयोग गर्ने हो। फोटो सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन पत्रिकामा आउने नाममा खिचिएका फोटाहरु पोष्ट गरिएकाहरु देख्दा हरेक निकायले सहयोग गर्दा कम्तिमा सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्ने हो। सहयोग गर्ने सबै निकाय र तहलाई धन्यवाद दिदै राहत वितरणको मापदण्ड पूरा गरि दिन हुन अनुरोध छ।
राहत बाँड्दा कम्तिमा सेयर मादण्डलाई पालना गरि दिनहुन अनुरोध छ। बिपत्त कोष र बिपत्त समितिलाई वडातहसम्म सक्रिय बनाउँदै जाउँ अभियान चलाऔं। गाउँ टोलमा तरकारी खाद्धान्न बैंक स्थापनाको अभियान चलाऔं। धेरै सरकार फेरिए, धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्री भए हामीले लामो संघर्षपछि एक थान संविधान र ठाउँठाउँमा सरकार पाएका छौँ। सरकार भएको अनुभुति पहिला बिपत्तमा परेका अनि सबै नेपालीले महसुस गरुन।
श्रमजीवीहरुले नै भोट दिएर धेरै सांसद हुनु भएको छ। नेता हुनु भएको छ। जिम्मेवार तहमा हुनुहुन्छ। जनताहरु खाना नपाएर छटपटाएका छन्। गाडी नपाएर चर्को घाममा सुदूरपूर्वबाट सुदूरपश्चिम तिर हिड्दै छन्। हप्तौ हिडेर आफ्नो घरपुग्ने चाहना राख्नु मजदुरहरुको रहर होईन बाध्यता हो। दर्दनाक स्थितिमा पुगेका हर कोही नागरिकको चित्कार सरकारले समयमा सुन्नुपर्छ।
सुदुर पश्चिम पुग्दा हालत के होला ? कति थलिएर मर्लान ? मैले लकडाउन भनेको गाडीमात्रै बन्द गर्ने अनि श्रमजीवीहरु भोकभोकै प्रचण्ड टन्टलापुर घाममा हिडिरहेको अवस्थामा श्रमजीवीहरुको सरकार कहाँछ ? महाकाली पारीका र सातसागर पारि बेहाल अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको उद्धार गर्नु पर्देन ? सरकार जिम्मेवार हुनु पर्देन ? चाइनामा डा.पढ्न गएका धनीका छोरोछोरी ल्याउन प्लेन चार्टर गरेर चर्चा कमाउने नेपाल सरकार सडकमा गुन्टो बोकेर भोको पेटको चित्कार गर्नेको आवाज सुन्नु पर्देन।
उनीहरुको सरकार कहाँ छ। तत्काल सुरक्षित उद्धार र राहत सरकारको दैनिक काम भित्र पर्छकी पर्देन सरकारी जिम्मेवारी हो कि होइन्? महासंकटको पिडामा छट्पटिएकाको अवस्था के होला ? भोकभोकै बसेकाको आत्माले के भनेको होला नेताहरु परिवारसंग रमाएको मिष्ठान्न परिकार बनाएर फोटोहरु पोष्ट गर्दा संकटमा पानी र खाना नपाएको आत्माले के भन्छ ? होला सायद ती पिडितहरु लकडाउनलाई सेलिबे्रटी बनाउने हो सामाजिक संजालको पहँचमा छेनन् होला।
कम्तिमा मानवअधिकारका दृष्टिले ब्यवहार गर्न सद्भाव देखाउन र बोल्नु पर्देन? सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउनु पर्देन? राष्टि«य मानवअधिकार आयोगलगायत अन्तर्राष्टि«य नियोगहरुको ध्यान जानु पर्दैन? तत्काल कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि गरिएको सरकारी लकडाउनका कारण बिपत्तमा परेकाको पहिचान गरि दैनिक खाना र सुरक्षित बासको ब्यवस्थापन गर्दे संकास्पद भएमा क्यारेन्टाइनमा राख्ने् उचित बन्दोबस्त र प्रबन्ध गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारसंग अपिल र अनुरोध गर्दे मानवअधिकार उलंघनका विषयमा आवाज बुलन्द गर्नका लागि आईतबार पर्खिनुपर्ने? कोहीबाट डराउनु नपर्ने भएकोले कम्तिमा ब्यावसायिक पहिचान दिनका लागि पनि राष्टि«य तथा अन्तर्राष्टि«य मानवअधिकारबादी आयोग नियोग र सञ्जालहरुमा एक पटक आवाज उठाउन अपिल गर्न चाहान्छु।
विश्वव्यापि रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि अग्र मोर्चामा होमिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संचारकर्मीको समेत जीवन रक्षाको सुनिश्चितता गर्न सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउनका लागि जोड्दार मागगर्दछु। हामी सबै मिलेर कोरोना कोभिड १९ लाई परास्त गरौं। मिलेर जितौं। तर, बिपत्तमा मानवअधिकारका मुल्य मान्यताहरुको पालना गर्दे पक्षपातरहित बातावरणमा सबै पक्ष र निकायबाट पालना गरौं। गराऔं।
सरकार जिम्मेवारीबाट बिमुख हुन नसक्ने र सबै सरकोकारवालाले साथ दिनुपर्ने राम्रो काम गर्दा एक्लैले गर्दा भयो भन्ने बिग्रिदा अरुले गर्दा भयो भन्ने मानसिकताबाट टाढा रहेर बिपत्तिको बिषम घडीमा सर्बपक्षिय संयन्त्र बनाएर खाद्धान्न अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार स्वदेश फर्किन पाउने अधिकार स्वास्थ्य अधिकारलगायत मौलिक अधिकारहरु, कर्तब्य र जिम्मेवारीसहितको बोध हुन् र गराउन अपरिहार्य भएको यस बिषम घडीमा कोरोनाको डर, त्रास र भयबाट मुक्त बनाउने अभियान थाल्न नागरिक समाजको तर्फबाट जोडदार रुपमा सम्बन्धित पक्षसंग जोड्दार अनुरोध गर्दछु।